Governemanta vonona hiatrika ady… saritaka
Ady amin’ny fahantrana, ny tsy fandriampahalemana, ny kolikoly, ny fanaovana ho tantely afa-drakotra sy ampihimamban’ny olom-bitsy ny harem-pirenena… Ireo ny hoe fanambin’ny governemanta vonona hiatrika ady. Mby aiza? Hatreto, tsy hita mazava izay fandaharan’ady, ny paikady, ny ady atao…
Manakorontana aza ny mpitondra sy ny mpitandro filaminana amin’ny fampisehoan-kery sy fampihorohoroana lava. Teo ny hetsiky ny mpanao gazety, ny 12 jolay: izaitratra toy ny amin’ny tany miady ny mpitandro filaminana. Na ahoana na ahoana, tsy mampilamin-tsaina vahoaka izany.
Teo ny tany Soamahamanina, ny 14 jolay: nokorontanin’ny mpitandro filaminana tamin’ny fanaovana barofo ny sorabaventy isan-tokantrano mitaky ny fialan’ny Sinoa mitrandraka volamena. Nampidina ny mponina an-dalambe izany, naparitaka tamin’ny baomba mandatsa-dranomaso… mampisaritaka.
Mifanohitra amin’izay hoe fanamby ny atao? Tsy hita be ihany izay ady amin’ny kolikoly. Odian-tsy hita ny “Raharaha Bekasy”, ohatra; ny “Raharahan-drongony” tany Toliara; ny kolikoly teny amin’ny Antenimierampirenena, tsy amelan’ny birao ny Bianco hanao fanadihadiana. Nahoana?
Vao mainka loza ny hiporitsahan’ny harem-pirenena mbola tantely afa-drakotra, raha tsy hiteny afa-tsy fanondranana sokatra an-tsokosoko tato ho ato, ohatra. Na ny “Raharaha Soamahamanina” maha tompony mangataka atiny ny vahoaka, na amin’ny fahalalana ny marina ihany aza: aato tanteraka sa… ?
Ady inona àry ny ataon’ny governemanta vonona hiatrika ady amin’izany ady saritaka rehetra izany? Na ady fanakorontanana tsy iarovana ny vahoaka sy ny fananany, fa ny mpitondra… matahotra korontana sy hiongana lava. Ady amin’ny vahoaka mahantra, fa tsy amin’ny fahantrana.
Governemanta tsy miady amin’izay izy? Mila miady amin’ny tenany aloha: mandeha amin’ny marina, manatanteraka izay lazaina, misy fangaraharana … Afa-kiady amin’ny mafy sy ny sarotra ve izay tsy mandresy ny tenany amin’izany aloha? Tsy hoe resy lahatra fotsiny, fa tsy manao izay iadiana amin’ny hafa…